Asia Money 2019 Best Bank for SMEs & Asia Money 2019 Best Bank for CSR – AYA Bank
Asia Money 2019 Best Bank for SMEs :
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ စီးပွားရေးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွားရေး အားလုံးအနက် ၉၀ မှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ SME လုပ်ငန်းများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော် အား ပြည်သူအများက အထူးပင် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလျက်ရှိကြသည်။ AYA Bank အနေဖြင့် ဖွံဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေဂျင်စီများနှင့် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးစစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (DEG-KfW)၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖွံ့ဖြိုးမှု Credit Agency၊ ဂျပန်နိုင်ငံ JICA အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြီစားများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ခြင်းများကို AYA Bank အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြင်သစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအမံတစ်ရပ်ဖြစ်သော AFD-Proparco၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် စသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ AYA Bank မှ ချေးငွေရယူထားသူ မြီစားများ အားလုံး၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်ယနေ့အချိန်တွင်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှချေးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
AYABankအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်အလယ်အလတ်တန်းစားစီးပွားရေးအခြေအနေတစ်ရပ်ဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ယနေ့အခြေအနေမှနှစ်ဆခန့်တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားလျက်ရှိပါသည်။
Asia Money 2019 Best Bank for CSR :
AYA Bankအနေဖြင့် AYA Bank The May Tour တွင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သော Leeds United အသင်းအား ဖိတ်ခေါ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြို့ကြီးများရှိ ပရိတ်သတ်များ ရှေ့မှောက်တွင် လာရောက်ကစားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
AYA Bank အနေဖြင့် အဆိုပါ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပလျက်ရှိသည်သာမက ဆေးရုံများနှင့် အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ လူနာတင်ယာဉ်များ လှူဒါန်းခြင်းများကို နိုင်ငံနှင့်အဝှန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
AYA Bank အား စတင်တည်ထောင်သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှစ၍ ဘဏ်ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်အနေဖြင့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသာမကပဲ သွေးလှူဒါန်းခြင်း၊ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ အစရှိသည့် လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကိုလည်း AYA Bank ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေရန် အားပေး တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ မကြာခဏ ခံစားရလေ့ရှိသော ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့် ဒေသများအတွက်လည်း သဘာဝဘေးယာယီခိုလှုံရန် နေရာများအား မြို့နယ် ၄ ခုရှိ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
AYA Bank In an emerging economy where an estimated 90 to 95 out of every 100 registered businesses are small and medium-sized enterprises (SMEs), Zaw Zaw’s Ayeyarwady Bank wins plaudits from its peers for its lively SME business. AYA’s tactic has been to partner with multilaterals, development finance institutions and aid agencies, providingaleg-up to Myanmar’s emerging small business community.
For example, AYA has teamed up with the state-backed German Investment Corporation (DEG-KfW), as well as the United States Development Credit Agency and Japan’s JICA to identify customers and provide loans with agency support. The French government’s development wing, AFD-Proparco, is alsoapartner, as is the Asian Development Bank.
Asia Money 2019 Best Bank for CSR:
AYA Bank The May tour by English football team Leeds United may not have won Leeds many friends outside Myanmar, its focus was all domestic.
Zaw Zaw’s AYA Bank claims to have committed $90 million in CSR efforts since it was founded in 2010. Beyond sorely needed infrastructure, staff are regularly encouraged to donate blood and plant trees.
AYA also sponsors disaster management programmes for vulnerable rural areas in the Ayeyarwady (Irrawaddy) river delta region, and it provided financial support for relief camps for flood victims in four stricken townships after recent inundations.
← ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၁) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
EDGE Certificate for Gender Equality →